Global Voices teny Malagasy » Rising Voices: Fifaninanana Volavolan-Tetikasa Hanitarana Ny Valantserasera · Global Voices teny Malagasy » Print
Rising Voices: Fifaninanana Volavolan-Tetikasa Hanitarana Ny Valantserasera
Voadika ny 14 Janoary 2012 14:35 GMT 1	 · Mpanoratra Eddie Avila Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Fara-fisoratana anarana: Zoma, 3 Febroary 2012 amin'ny 11:59 hariva ora GMT
Rising Voices dia mitady tetikasa izay mitovy tanjona aminay amin'ny fitondràna feo ny vondrom-piaraha-monina vaovao, sy ny tenim-pirenena tsy dia andrenesam-peo eo amin'ny dinidinika iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fampiasàna fampielezam-baovaon'olon-tsotra. Ny asa voalohany tokony ataon'ny tetikasa dia ny manome atrikasa fanofanana ny fitaovana fampielezam-baovaon'olon-tsotra ho an'ny vondrom-piaraha-monina kinendry, ary eo koa fanohanana sy fitarihan-dalana tsy tapaka ho an'ireo mpandray anjara. Tsidiho ny lisitr'ireo tetikasa eo ampanatanterahana  sy eo ampanolorana  novatsiana raha te-hahita santionany amin'ireo tetikasa efa novatsiam-bola ianao.
Ireo liana te-handray anjara dia tokony hameno ny “taratasy” fandraisana anjara fenoina amin'ny aterineto (ato ny rohy ), izay tokony ahitàna ny tetibola amin'ny antsipiriany ihany koa. Tena zavadehibe tokoa ho an'ny mpandray anjara ny manaraka ny isan'ny voambolana amin'ny fitarihan-dalana isaky ny fanontaniana.
Raha te-hisintona ilay “taratasy” fandraisana anjara ianao mba hamitàna izany ivelan'ny aterineto ka hampiakatra azy indray avy eo, sintony ato ny antontan-taratasy eto  (endrika Google Doc). Na izany aza dia tsy maintsy tafapetraka an-tserasera avokoa ny taratasy fandraisana anjara rehetra ary tsy manaiky tovana fanampiny izahay. Vantany vao tafapetrakao ny fandraisana anjara dia hahita fanamafisana an'efijery tahaka izao ianao . Na dia mandray sy mandrisika ireo tetikasa rehetra avy amin'ny vazantany efatra aza izahay dia amin'ny teny Anglisy no tsy maintsy hanaovana ny fandraisana anjara rehetra satria io no teny iraisan'ny vaomiera.
Ny fisoratana anarana dia mifarana ny 3 Febroary 2012 amin'ny 11:59 alina GMT(Azafady amarino tsara  ny oran'ny toerana misy anao amin'izany fotoana izany). Hojeren'ny vaomiera ao amin'ny tompon'andraikitra sy mpirotsaka an-tsitrapo avy amin'ny Gobal Voices ny volavola, ary hanamarina ihany koa ireo mpikambana amin'izay efa novatsian'ny Rising Voices teo aloha. Hambaranay alohan'ny 28 Febroary 2012 ireo hahazo ny famatsiam-bola
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/01/14/27481/
 ato ny rohy: http://www.surveymonkey.com/s/rv2012
 fanamafisana an'efijery tahaka izao ianao: https://rising.globalvoicesonline.org/files/2012/01/completedsurvey-copy.jpg
 amarino tsara: http://www.thetimezoneconverter.com/?t=23:59&tz=GMT